Fikradaha naqshadaynta 24 Sun Tattoos Fikradda Nimco Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Fikradda naqshadda 24 Sun Tattoos ee loogu talagalay ragga iyo dumarka
Waqti dheer ka hor, qoraxdu waxay la xidhiidhaa macno badan oo gaar ah gaar ahaan marka aynu tixgelinno xayawaanka laga bilaabo Mayan ama xitaa hieroglyphics Masar. Ma jiro wax abuur ama qaab aan ku aragno meydka rag iyo dumarba.
Tattoo qorraxda macnaha
Qorraxda Sunta ah waxay mar walba caan ku ahayd xitaa inta lagu jiro waqtiyadii hore. Dabeecadda asalka ah ee #sun waa waxa soo jiidata ragga iyo dumarka labadaba. Muhiimadda qorraxda waxay noqon kartaa mid xun ama mid wanaagsan, tani waxay ku xiran tahay dhaqanka meesha uu qofku ka yimid. Wax qarsoodi ah ma aha in nolosha aan la joogi karin iyada oo aan qorraxda. Qorraxdu waxay noqon kartaa nolol, awood, tamar, jacayl iyo taageero nolosha. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa dib-u-dhalashada iyo diimaha qaarkood waxay leeyihiin macne gaar ah oo ku saabsan qorraxda. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo qorraxda #tattoo loo sawiri karo waxayna leeyihiin macnahooda. Qorraxdu soo baxday waxay macnaheedu noqon kartaa awoodda Ilaah iyo jiritaanka weyn. Dad badan ayaa isticmaala qorraxda si ay u ekaadaan sida qoraxda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee taageeraha isboortiga intiisa badan isticmaala.
Macnaha qorraxda qorraxda waa sababta dadka doonaya inay muujiyaan awoodooda iyo maskaxdooda gudaha ah inta badan u tagaan. Qorraxdu waxay ku soo baxdaa midabyo kala duwan sida midabka midabka leh oo leh macnayaal gaar ah. Qaabka qoraxda ayaa sidoo kale leh macnooyin badan marka la eego dhaqanka in tattoo uu ka yimaado. Sawirada qorraxdu waa mid aad u fiican oo aad u fiican.
Farshaxanka tattoo ee xirfadlaha ah waa cidda aad u baahan tahay si aad u hesho tattoo sida quruxsan sida tan. Miyaad maqashay meeleynta marka ay timaado qaabeynta tattoo?
Meeleynta tattoo waa waxa adiga iyo artist-kaaga aad ka shaqeyn kartaan. Qayb ka mid ah jirkaaga meesha aad dhiganeyso tattoo-gaaga ayaa aad muhiim u ah. Tani waa sababta oo ah s meesha macnaha tattoo laga akhrisan karo.
Tattoo Sun Tattoo
Tattoo Tani waa mid aad u qurux badan sababtoo ah waxaa si fiican u dhigtay jirka. Ma jirto qayb ka mid ah jirkaaga halkaasoo tattoo-gaaga aanad u muuqan karin.
Tattoo awood leh
Waxaan aragnay markii ugu horeysay ee dadku ay isticmaalaan shaatiinka meelaha qaarkood.
Wareegtada Sunta Tattoo
Waa inaadan gorgortamin marka ay timaaddo heerka caafimaadka ee qolka. Haddii aadan ku qanacsanayn heerka qaan-gaadhka, waa inaad ka baxdid. Caafimaadkaagu waa waxa ugu muhiimsan ee la tixgeliyo ka hor intaanad helin tattoo.
Maskaxda Tattoo Sun
Markaad iibsanayso, waa mid aad u fudud in la helo qiimo qumman ee tattooadaada. Waa inaad marnaba wax u dhimeyso caafimaadkaaga haddii aad tattoo qaadato.
Lugaha Tattoo Sun
Tani waa sababta aad u isticmaali lahayd khabiir tattoo ah.
Toutoo Cirifka Qorraxda
Waxaa jira khabiiro badan oo ka shaqeeya halkaan si ay u taageeraan dabeecadaada hal-abuurka ah marka ay timaaddo tattoo cajiib ah sida tan.
Tartoo buuxa qorraxda
Muddo sanado ah, waxaynu aragnay dadku inay ku ciyaaraan tattoo sababtoo ah sida ay u quruxda u tahay maqaarka. Waxaa jira naqshado kala duwan oo la yimaada tattoo.
Gacanta Qalinka Tattoo
Waxaad bedeli kartaa ama bedeli kartaa habka sawiradu u egtahay. Waxaa jira dad doonaya in ay qeexaan tattoo-kooda si ay u kala duwanaayeen dadweynaha.
Back Tattoo Sun
Tattoo ayaa noqotey isbeddel aan marnaba jajabin sanado badan. Sababta tani waxay sabab u tahay sida ay dadku ula imaanayaan hal abuur leh cajiib ah.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto midab ama xitaa isku day inaad sida tattooada u egtahay.
Kharashka helitaanka tattoo way ka duwan tahay meel ilaa meel. Farshaxanayaasha waxay kaloo leeyihiin qiimo kala duwan qiimaha adeegyadooda. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad waqti qaadatid si aad u baartid waxoogaa internet ah si aad u hesho qiimo qumman oo ku saabsan tattoo sida tan quruxsan.
Qorraxdu waxay noqotay tattoo caan ah oo matalaysa cusboonaysiinta, tamarta iyo awoodda. Waxaa loo tixgeliyey mid ka mid ah naqshadihii hore ee tattoo loo yaqaan. il image
Waxaa jiray wakhti qorraxda loo tixgeliyey dadka asaliga ah ee Maraykanku ahaa ilaaliyaha Dunida. Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in ay keentay koritaanka, diirimaadka iyo wanaagga. il image
Qorraxda waxaa lagu caabudaa Celtic iyo Norse ee Yurub. Taas macnaheedu maaha in qof kasta oo qorraxda ku jira uu yahay cibaadaysi. il image
Tattoo waxaa loola jeedaa wax aad u gaar ah qofka xiran. Dumarku waxay jecel yihiin nooca tattooka maxaa yeelay waa mid aan qurux badaneyn oo qurux badan. il image
Dhammaadka maalinta, waxaad isticmaalaysaa tattoo oo sheegaysa sheekooyin badan oo weliba waxay ku siinaysaa geesinimo si aad ugu guurto hab nololeedkaaga. Maxaad u maleyneysaa? il image
Quruxdaasi waxay tahay inaad ogtahay inaad haysato mid ka mid ah shaatiinka ugu fiican jirkaada oo kaliya oo aad sii deyn karto markasta oo aad rabto inaad ku faanto adduunka si aad u aragto. il image
Waxaa jira siyaabo aad ku dhigi karto tattoo-gaaga inay u muuqdaan kuwo aad u jecel marka aad dooranaysid qaabka, qaabka, naqshadeynta iyo midabada si kor loogu qaado qaybta jidhkaaga ee aad rabto in aad quruxda il image
Mashruucani ma u muuqdaa mid qurxoon? Si aad u hesho waxay u baahan tahay baaritaan yar oo adiga kuu gaar ah. Waxaa laga yaabaa xataa xitaa kuma qaadato wakhti aad ku dooranayso naqshaddaas ama habka ku haboon ee kugu habboon. il image
Maqnaanshaha naqshadeynta aad dooranayso, waxa muhiimadiisu tahay tattooist kaasoo suurtagal ah. il image
Iyadoo taatuucan adiga kuugu jiro, ma noqon doonto qof kasta oo arki doona marka laga reebo inaad u muujiso dadka kale inay arkaan. il image
Marka ay timaado jimicsi qorraxda, waxaa jira boqolaal naqshadood oo laga soo doorto. il image
Waxaad go'aansan kartaa inaad leedahay nooc kasta oo tattoo ah sida aad u rabto inaad u sheegto. Waxay noqon kartaa sheeko, cashar ama xitaa xasuusinta waxyaalaha aad rabto weligaa iloobin.
Marka ay timaaddo inaad doorto shaati sidan oo kale, waxay qaadataa diyaar garow badan si aad u hesho wax sida quruxsan sida tattoo this. il image
tattoos cagtatattoos moontattoos iskutallaabtatattoos taajkiigadaal u laaboTilmaamta jaalaha ahtattoo maroodigakoi kalluunkasawir gacmeedJoomatari Tattoossawirada malaa'igtaku dhaji tattooslibto libaaxwaxay jecel yihiin tattoostattoos saaxiib saxa ahlaabto laabtatattoo indhahataraagada kubbaddatattoos qabaa'ilkashimbir shimbirfikradaha tattoocalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahlammaanahatattoos ubaxtattoos gacantagaraacista gacmahatattoo tilmaanhenna tattoonaqshadeynta mehnditattoos qoortaTattoo Feathertattoos qorraxdatattoos eagletattoostattoos sleevejimicsiga bisadahaTattoos Wadnahasawirrada raggatattoo ah octopusshaatiinka shiidantattoos qosol lehtattoo dheemanTartoo ubax badanmuusikada muusikadatattoo biyo ahsawirada gabdhahaDhaqdhaqaaqawaxaa la dhajiyay tattoosarrow TattooTattoo infinity